तपाईंको समस्या , हाम्रो सुझाव - १४ - Safal Stories
Home Reader's Blog तपाईंको समस्या , हाम्रो सुझाव – १४
म २१ बर्षकी भएँ । म सफल स्टोरीजको सबै पोस्टहरु हेर्छु, पढ्छु । तर पनि ममा एउटा कमजोरी छ , जसलाई म परिवर्तन गर्न सकिरहेकी छैन।
म कुनै नयाँ ठाँउमा गएर घुममेल हुन, आफ्नो कुरा राख्न सक्दिन, जसको कारण मैले आफ्नो यो समय सम्म केही गर्न सकेको छैन।
कहीं गएर पनि बोल्न डर लाग्छ । कतै कसैले केही भन्छ कि, गाली गर्छ की भन्ने डर लाग्छ । यही कमजोरीका कारण मलाई सबैले हेप्छन् । म केही निर्णय लिन सक्दिन । मेरो जिन्दगी बोझ जस्तो लाग्छ, म कसरी आफूमा यो नराम्रो बानी परिबर्तन गर्न सक्छु ? के हजुरहरुबाट केही सल्लाह सुझाव पाउन सक्छु?
तपाईंले आफ्नो अगाडी भाषण दिइरहेका, बोलीरहेका, आफ्ना तर्क राखिरहेका जति पनि मानिस देख्नुहुन्छ, उनीहरु सबैजसोको समस्या पनि पहिले तपाईंको जस्तै थियो । फरक यो हो कि, केही त्यो कुरा बताउँछन् , धेरैले बताउँदैनन् । सुरुमा उनीहरुका पानी खुट्टा कांपेका हुन्छन् , हातका औंला कांपेका हुन्छन् , बोली काँपेको हुन्छ, कसैले केही भन्छ कि, गलत बोलें कि भन्ने डर हुन्छ । यहाँ सम्म कि, कोही हाँस्यो भने, मलाई नै गिज्याएर हाँस्यो कि भन्ने सम्म लाग्छ । त्यो समयमा यदि त्यो व्यक्ति रोकिन्थ्यो भने, ऊ कहिल्यै अगाडी बढ्न सकेन , तर त्यो व्यक्तिले फेरी पनि बोल्ने प्रयास गर्यो र उसमा विस्तारै आत्मविश्वास बढ्यो, त्यसैले ऊ आफ्ना तर्क राख्ने बन्यो ।
तपाईंको वरिपरि भएका व्यक्ति कोही पनि सर्वगुण सम्पन्न छैनन् । सबैले गल्ती गरेका हुन्छन् । तर त्यो गल्ती पछि त्यसबाट सिकेर अगाडी बढ्नेहरु आत्मविश्वासी हुन्छन् । म बोल्न सक्दिन भनेर पछाडी नहट्नुस् । पहिलो पटक तपाईंले केही गल्ती गर्न सक्नुहुन्छ, दोस्रो पटक तपाईंले त्यो भन्दा कम गल्ती गर्नुहुन्छ । त्यसपछि तपाईंमा आत्मविश्वास बढ्न थाल्छ । तपाईंले जब आफ्ना कुरा व्यक्त गर्न थाल्नुहुन्छ, तब मान्छेहरुले तपाईंलाई चिन्छन् । तपाईं पनि कुराकानी गर्न अगाडी बढ्न थाल्नुहुन्छ र सहजै घुलमिल हुन थाल्नुहुन्छ । तपाईंले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नको लागि बोल्ने बानीको विकास गर्न चाहनुहुन्छ भने लेख्ने गर्नुहोस् । लेख्दा आफूले मनमा लागेका कुराहरु लेख्नुहोस् , आफ्ना तर्क राख्नुहोस् । यसले गर्दा तपाईंले आफ्ना विचार, तर्क राख्ने बानी पर्दै जान्छ र विस्तारै तपाईंमा आत्मविश्वास बढ्दै जान्छ ।
कृपया यी सामग्री पनि पढ्नुहोला :
डरलाई कसरि कम गर्ने ?
आत्मविश्वास बढाउनको लागि ५ सजिला तरिकाहरु
मन्चमा कसरि आत्मविश्वासका साथ बोल्ने ?
Previousव्यवसायीक जीवनबाट बिदा लिएपछि ज्याक मा शिक्षक बन्ने !
Nextनेपालको एक सफल उद्योग जगदम्बा ग्रुपका अनिल कुमार रुङ्गटाको संघर्ष र सफलता